Maxkamadda ugu sarraysa Maraykanka oo ogolaatay qorshaha soogalooti dhimista - BBC News Somali
Madaxweyne Trump ayaa Twitter-ka ku soo qoray arrintaasi waa "Guul wayn oo maxkamadda ugu sarraysa Maraykanka ay ka soo hoyisay arrimaha xuduudaha iyo soogalootiga".
Kuuriyada Waqooyi oo siidaysay muwaadhiniin Maraykan ah
Trump iyo jeneraal Maraykan ah oo goroda iskula jira
Isbadalladan maxay ka dhigan yihiin?
Ururka aan faa'iido doonka ahayn ee xuquuqda u dooda ee The American Civil Liberties Union, oo go'aankan ka soo horjeeda ayaa sheegay in arrintani ay aad u dhimayso dadka xaqa u yeelanaya in ay magangalyo dalbadaan.
"Sharcigan wuxuu qarka u saaran yahay in uu meesha ka saaro dadka magangalyada doonka ah ee dalka ka soo gala dhanka xadka Koonfureed, xataa dekedaha, dadka oo dhan ayuuna qabanayaa marka laga reebo muwaadiniinta Mexico." Ayuu yiri ururkaas oo billaabay ol'ole uu kaga soo horeedo xukunka maxkamadda sare.
Maxaa arrintan ka dhigay mid muran dhalisay?
"Mar kale ayay laan sare soo saartay sharci baalmaraya dhaqan wakhti dheer soo jiray oo khuseeya qaxootiga magangalyada raba iyaga oo ka soo cararaya caddaadis ama in si xun loola dhaqmo," ayay qortay Sonia Sotomayor.
Dhanka kalana waxaa su'aalo laga keenay in Mexico iyo Guatemala ay xamili karaan qulqulka dadka magangalyo doonka ah.
Mexico ayaa ku celcelisay diidmada in ay Maraykanka u noqoto "dal saddexaad" arrintaas oo ka dhigan in marka hore ay ka baaraan degto dadka magangalyo doonka ah ee doonaya in ay Maraykanka galaan.